Nzira Yokutengesa Bitcoins - Tengesai Makore Ako Chekuita Ku Fiat
Kushandisa Bitcoin kunogona kunge kuri nyore, ndicho chikonzero vakawanda vanoda kuedza nekuzvinzwisisa Chii chinonzi Bitcoin. Vazhinji vashandisi vaizopedza bitcoins pakutengesa nzvimbo uye nekuda kwekutenga kwavo kwepaIndaneti, asi kune vamwe vangada kuitengesa. Vaizozvitenga munguva yakare kare apo zvichiri kutengeswa ndokutengesa gare gare apo mutengo wayo wakawana zvakanyanya. Ndicho chikonzero chevanhu vakatenga bitcoins mumazuva ekutanga uye iye zvino vava vapfumi. Mibvunzo ndeyekuti, sei kutengesa bitcoins? Zvakanaka, pane nzira mbiri dzekutengesa.
Nzira yekutanga yekutengesa bitcoins ndeyekushandiswa kwekutengeserana kwepaIndaneti. Kubudirira kwekushandisa kugoverana ndeyekuti ndivo ndivo vanoita basa renyu. Vanosunungura zvinyorwa kubva kwauri Wallets. Zvose zvaunofanirwa kuita ndezvokugadzira kutengeswa uye kurega iwe kuenda.
Kutengesa paIndaneti kune marudzi akasiyana. Kutanga, kushandiswa kunongobatsira chete kushambadzira. Inobatanidza mutengi uye mutengesi kuti ataure. Shanduro yacho inotora chikamu chekuita basa racho. Chechipiri, mutengesi uye shanduro ichave nekutengeserana zvakananga. Kutengesa ndiyo iyo inotenga zvinotengesa mutengesi. Vanowanzozviita kuti vawedzere bitcoins kumagetsi avo. Chechitatu, zvikwata zvevezera-kune-peer zvinowanikwa kune avo vanotengesa mabhakanyi avo kune mamwe mabasa kana zvinhu.
Mumwe wechitatu anobatanidzwa mumutambo uyu wokutengesa unobatsira asiwo unotadza. Dambudziko rinogona kuitika kana chikamu chechitatu chinoda kuderedzwa kana kunonoka kwekutengesa. Asi bato rechitatu rinogona kuita kuti mutengesi uve nani nokuti unogona kuvimbisa mutengi uye mutengesi wekutendeseka kwekutengesa.
Imwe nzira yekutengesa bitcoins ndeyokuitengesa mumunhu. Vanhu vanobatanidzwa vachafanirwa kusangana uye kuita zvayo. Nenzira iyo, hapana munhu wepakati uye ipapo inogona kuitwa pasina iko. Zvose zvavanofanira kuita ndeyekuverenga QR codes nefoni yavo uye kuti vave nekutengeserana. Chinetso chacho ndechokuti pasina chechitatu pakati pavo, vangasabvumirana nemutengo. Uyezve, kuzvidzivirira kwega kwega hakugoni kuvimbiswa zvakasiyana nematengesi ekutengesa. Imwe dambudziko nayo ndeyokuti hakuna vanhu vakakwana kunze uko vanoda buy Bitcoin mumunhu. Vanhu vakawanda iye zvino vanosarudza kutengesa paIndaneti nekuda kwezvakanaka, asi kana iwe uchida, unogona kunge uchiedza kutengesa mumunhu.